Kudzora Kwaungaita Mashuviro eRopa uye Reverse Leptin Resistance - Kukosheswa maResti
musha » Blog » Kudzora Kwaungaita Mashuga eChido uye Reverse Leptin Resistance
Vanhu vasingaverengeke pasi rese vane leptin inodzivirira, uye vazhinji havatozvizive. Iyo yakajairika yemazuva ano chirongwa chekudya chinhu chakakosha chinhu. Kudya zvakawanda zveshuga, zviyo, uye chikafu chakagadziriswa chinokonzeresa ako maseru emafuta kuzadza muviri wako neleptin. Zviite zvakajairika, uye muviri unochinjika nekuva unodzivirira kune leptin.
Maitiro aya anoshandawo nenzira yekuti vanhu vangaramba sei insulin. Zvinokusiya uchinzwa kurwara, kusakara, uye kuziya nenzara nguva dzese-- kunyangwe paunenge uchidya zvakanyanya kupfuura zvinoda muviri wako. Kana iwe uine zvekudya zvekudya nguva dzese uye iwe uri kugara uchitsvaga chimwe chinwiwa kuti chikutorere iwe kusvika nguva yekudya, saka pane mukana wekuti iwe uri leptin unodzivirira.
Kunze kwekudzora zvishuwo zvekudya (kunyanya kushuvira kwechikafu chisina hutano) zvinokunda zviratidzo zveleptin kuramba. Isu tinokukurudzira kuti iwe uedze kupatsanura chikafu chako kuitira kuti pave neanoda maawa mana pakati pavo, uye usazvirege pachako utore pane chero chinhu. Kana izvi zvakakunakira iwe, pane mukana wakawanda wekuti urambe nemaleptin. Kubatwa nehope uye kusadya zvakaringana kungave kuri kupomerawo nekudzvinyirira leptin.
Kana iwe uchidya uye uchiedza kudzikisa huremu nekukurumidza, izvi zvinogona kusunga mune yako leptin kuramba nenzira hombe. Zviri kuyedza zvakanyanya kuti utemhe zvakanyanya ako macalorie paunenge uchiedza kudzikisa huremu. Nekudaro, panguva ipi neipi yekudzvinyirirwa kwakanyanya kwecalori kunogona kudzosera shure, zvichikonzera muviri wako kuchinjika nekupedzisira wave kunyanyisa kuramba leptin. Izvi zvinokonzerwa nekuti mushure mekukurumidza kugadzirisa caloric, muviri wako unoita zvese musimba rawo kubatirira kumafuta akachengetwa. Izvi zvinoitika kune vanhu vazhinji netsaona pavanoyedza kuchinja kune chinoshamisira chikafu chePaleo.
Iko kusanganiswa kwekushushikana kwepamusoro uye kwete zvakakwana kurara kunokwidza yako cortisol uye mahormone mazinga. More cortisol inoguma mukuwedzera kunetseka uye kushoma kurara, zvichitungamira kune yakashata kutenderera iyo inoguma nenzira imwechete nguva imwe neimwe: hutano husina kunaka. Kana usiri kutora matanho ekugadzirisa kushushikana kwako kana kutora kanokwana maawa manomwe kusvika masere ekurara husiku hwoga hwoga, uri kuzviitira kusaruramisira. High cortisol mazinga anokonzera leptin kuramba, uye kana ikasiiwa isingadzorwe, inogona kukonzera kufutisa, kuzvimba, uye kuwedzera njodzi yechirwere chemwoyo.
Kana iwe uchingodya shuga yakawandisa zvakadaro, saka izvi zvinogona kuve pakati pezvakanyanya kukosha zveyako leptin kuramba. Shuga inogona kukuvadza hutano hwako munzira dzakawanda. Pane zviripo chimwe chinhu nezve shuga inotikochekera uye inoramba ichititenderedza isu zvakare uye zvakare. Kunyangwe tichida kana kusada shuga ine bata mukuru patiri. Kana iwe uri kuverenga izvi zvinonyanya kuitika iwe unonzwisisa, uye uine wekutanga-ruoko ruzivo, rwekukwezva uku. Shuga haisi yekungovhengisa chete, kumanikidza; hapana chinhu chakadai sekumira mushure me "nyore" chigadzirwa cheshuga ..
Isu tinopihwa nezvikonzero zvakawanda zvekushuga kwedu shuga: kutsvaka mafaro masekiti, kushomeka kwemamineral, zvipembenene zvemudumbu, kushomeka kwezvikafu zvinovaka muviri, zvirongwa zvisina kukwana zvekudya, hunhu hwetsika, munyu wakawandisa, takaviga matambudziko emupfungwa, kushaya hope, kushushikana… uye zvatinoda, kushayikwa kwechirango. Isu hatisi kurasikirwa nezvikonzero zvekupindwa muropa neshuga, asi kuziva hakuna kukwana kutishandura isu kana maitiro edu. Dai kuziva kuchikwana isu tese taizohwina menduru dzegoridhe nenyeredzi dzegoridhe munzvimbo dzese dzehupenyu hwedu. Kana paine chero chinhu, kuziva kunoita chete kuti zviwedzere kutonyanya… isu tinoziva zvirinani saka sei tisiri kuita zvirinani? Kunzwisisa kunoguma kuchingova chimwe chikonzero chekuti tizvinzwire zvakashata isu pachedu.
Chechipiri chiito kunzwisiso kuyedza uye nekuwana mhinduro yacho. Isu tinotora zvinhu mumaoko edu pachedu uye nesimba rekushandura switch yedu ine shuga-kubva kubva ku on to off. Iyi haisi nzira isina kurwadziwa, uye kana tichinzwa kuti tiri kugadzira chimwe chinhu chinoitika kuti vatikande kunze uye tiri pachinangwa chekutsvaga chero shuga yatinogona kuwana nekudzoka pakutanga.
Kana isu tasarudza kunongedza kutsamira kwedu kwetsvigiri, tinorwisa shuga pachayo, tinobvisa kicheni, kudurura imba yezvinhu zvese uye tichizivisa shuga muvengi. Uye izvi zvakanaka… kunze kwekunge zvisingashande. Kana isu tavandudza chirongwa chekuita seichi, isu tiri vaviri zviito zvakanyanya kumberi uye kubata nemirayiridzo isiriyo. Isu hatigadzirise zviri kutora nzvimbo zvechokwadi.
Chakavanzika: tarisa nyaya yechokwadi, kwete iyo divi-mhedzisiro yenyaya. Uye shuwa shuwa ndiwo mativi-mhedzisiro, iwo mucherechedzo wedambudziko rechokwadi, uye kurapwa zviratidzo hakuite kuti nyaya ive nesimba. Iyo chete nzira yekukudziridza yechokwadi, yakareba-yakamiswa shanduko ndeye kugadzirisa iyo yakakonzera iyo inotyisa shuga cracings ... zvikasadaro urikungopambadza nguva yako nekuzvigadzirira iwe kune imwe yemberi shuga binge.
Chii chinokonzera chikonzero? Iko kushora kwe leptin kwatakataura nezvako kare. Imwe nzira yekudzora yako shuga shuwa uye inodzosera leptin kuramba iri neyechisikigo yekuwedzera leptitox, inova musanganiswa wezvinhu makumi maviri nezviviri zvepanyama zvinoshanda zvinobata nemuviri wako kudzosera leptin kuramba uye mhedzisiro. Kana leptin kuramba kunoitika mumuviri wedu isu tine malfunctioning system. Kuputsika uku kunounza zviratidzo zvinonetsa. Kwete kungoti leptin kuramba inowedzera chishuwo asi inounza zvishuwo! Ndiyo nzira yenjodzi! Kwete chete kuti uchave uchiziya nenzara asi unenge uchishuvira mhando dzakaipisisa dzezvikafu zvinogoneka…
Tingave takapomera zvimwe zvese pasi pezuva kutadza kwedu kurega kusvika kukuki inotevera… zvese asi leptin kuramba. Kana iwe uchida kuona chaiko kufamba uye kuchinja iwe unofanirwa kunanga leptin kuramba uye ita chimwe chinhu kuti "chigadzirise" icho.
Leptitox ndiyo nzira chete yekupinda muchinetso chiri kukura che leptin kuramba, uchifunga kuti yakagadzirwa kuti igone kurigadzirisa. Leptitox isanganiswa ye22 yakanyatsosarudzwa mishonga yemakwenzi, amino asidhi uye mavitamini ane simba rekubatsira muviri wako kugadzirisa chairo chikonzero chekupokana leptin. Ichachinja chero zvawanga uchifunga iwe uchiziva nezvekudzora uremu.
Izvo makumi maviri nemaviri zvigadzirwa muLeptitox zvinoshanda pamwe kuti zviite zvinhu zvitatu: batsira muviri kubvisa detox, kudzora zvishuwo uye kukurudzira kurasikirwa kwehuremu zvine hutano. Dozi yezuva nezuva mapiritsi maviri anonwiwa kamwe pazuva, uye zvinokurudzirwa kutora iwo maviri makapisi 22-3 maminetsi usati wadya. Kana iwe uri mutsva mukutora zvinowedzera, tinokukurudzira kuti iwe ugadzire alarm pafoni yako kuti ikubatsire kukuraira iwe kuti uzvitore usati wadya.
Kana iwe uchizeza kuongorora chigadzirwa ichi kunze, Leptitox inoshandisa yakazara-mazuva makumi matanhatu mari-kudzoka saka hauna kana chaunorasikirwa kana ichi chekuwedzera chikasashanda kwauri. Order Leptitox nhasi uye uzviyedze iwe.